Al-Shabaab oo weerar ka geystay duleedka Mandheera & khasaaro ka dhashay | Banaadir Times
HomeUncategorisedAl-Shabaab oo weerar ka geystay duleedka Mandheera & khasaaro ka dhashay
Xubno la sheegay inay ka tirsanaayeen Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa ay weerar ku qaadeen Goob ay ku sugnaayeen Ciidamo ka tirsan kuwa Kenya, taas oo ku taal duleedka Magaalada Mandheera ee Gobolka Waqooyi Kenya.
Weerarka ayaa waxaa uu sigaar ah uga dhacay deegaanka Sheekh Barroow ee duleedka Mandheera, waxaana goobjoogayaal ay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta dagaal kooban oo dhex-maray ciidamada Kenya & Al-Shabaab.
Al-Shabaab oo weerarka ka hadlay ayaa waxaa ay sheegeen inay dileen Sarkaal ka tirsan Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Kenya, kuwaas oo mararka qaar howlgallo gaar ah ka fuliya degaano ka tirsan Gobolka Waqooyi Bari.
Saraakiisha Ciidamada Kenya ee Gobolka Waqooy Bari weli kama hadlin weerarkaas & khasaaraha ka dhashay, hayeeshee dhowr jeer ayaa weeraro noocan oo kale ah ay ka dhaceen Gobolkaas.
Al-Shabaab ayaa mararka qaar waxaa ay Ciidamada Kenya ee ku sugan degaananda Gobolka Waqooy Bari ku qaadaan weeraro isgu jira qaraxyo miino iyo kuwo toos ah, waxaana ka dhashay khasaaro kala duwan.
Previous articleDil ka dhacay Magaalada Beledweyne & faah faahin kasoo baxeysa
Next articleCiidamada Dowladda & kuwa AMISOM oo howlgal kula wareegay Saldhigyo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab